Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwayne Farmaajo oo Turkiga Lagu Soo Dhaweeyay.
Madaxwayne Farmaajo oo Turkiga Lagu Soo Dhaweeyay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Turkiga ayaa la kulmay dhigiisa waddanka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdoğan.
Madaxweynaha Turkiga ayaa xarunta madaxtooyada dalkaasi ee caasimada Ankara ku qaabilay Madaxweyne farmaajo, waxayna ka wada hadleen xidhiidhka iyo Iskaashiga ka dhaxeeya labada wadan ee Turkiga iyo Soomaaliya.
Dhanka kale, Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Farmaajo iyo waftiga uu hoggaaminayay ayaa booqday barlamaanka turkiga, iyagoo la kumay xildhibaano ka tirsan xisbiga Erdogen ee AK part, waxaa kaloo uu la kulmay afhayeenka barlamaanka turkiga Ismail Kahraman.
Booqashadda madaxweynaha oo muddo saddex Maalmood ah soconaysa, inta uu joogo wuxuu la kulmi doonaa maasuuliyiin sar sare oo dalka turkiga ka mid ah, shirkado ganacsi, hay’adaha gargaarka ee dalkaasi iyo jaaliyadda iyo ardayda Soomaalida ee dalkaasi ku nool.